Indlela yokulayisha iifayile ezinkulu kwi-Google Drayivu - i-Geofumadas
Indlela yokulayisha iifayile ezinkulu kwi-Google Drayivu
Agasti, 2012 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Le nkonzo yeGoogle yokugcina inthanethi. Ngenxa yokuyiqalisa ngokukhawuleza, inkonzo yokuvumelanisa kunye nokulayishwa kweefayile ezinkulu kunzima.
Kodwa ngenxa yokuba ivela kwiGoogle, iya kukhula kwaye akuyona ingcinga embi ukuba ubani enze utshintsho kwiGoogle Amadokhumenti ukuya kwi-Google Drayivu.
Kuze kube namhlanje, akukho mntu uthabatha ilungelo DropBox, ukuba kumcimbi womthwalo kunye nokuvumelanisa kuyamangalisa, kunye nokunciphisa indawo.
Ifayile ye-45MB ingathatha iiyure ezimbini ukulayisha kwi-Google Drayivu, kwaye ukuvumelanisa akuthumeli uphawu njengoko luhamba. Masingathethi ifayile ye-300 MB.
Okwangoku ndilungiselela Ikhosi ye-AutoCAD 2013, Nguwuphi unako umxokozelo, ndiye ndabona enye idiski ezimbini ikhosi kuquka izahlulelo 14 300 MB ziye wangena kwibhokisi kwithuba lemizuzu 54, lo gama Google Drive sele intlekele ubusuku ezimbini ukuya ukukhwela isibini fayile.
Ngokude nje iGoogle iphucula oko, nangobuqhinga obufana nokuxazulula ukuhamba kweGoogle Drive:
Le nkonzo yokuvumelanisa phakathi kwe-akhawunti yokugcina i-intanethi, enokunyanisekisa into esinokuyilindela:
Ungaqhagamshela kuphela i-Google Drayivu / Amadokhumenti, kodwa kunye neDropbox, i-SugarSync, iBasecamp, i-Evernote, iBhokisi kunye ne-Salesforce.
Isisicelo esisebenzisekayo seCrohome, evumela iinkqubo ukuba zisebenze ngokufanelekileyo nangemvelaphi. Xa uvula i-Google Drayivu, iwindow ye Dropbox ebonakalayo ibonakala, ikuvumela ukuba ulawule iziqulatho ezigcinwe kuzo zombini izikhala ezivela apha.
Ukujoyina le nkonzo, sebenzisa umsebenzisi we-Google uze uhudule iinkonzo esizifunayo ukuba zifake. Kule meko ndikhethile iDropbox kunye neGoogle Drive.
Emva kokuxhunyiwe, kungenziwa phakathi kwe-akhawunti kunye nezinye izinto ezifana Hambisa, Khuphela, kwakhona khuphela ngqondweni. Ndiyamangaliswa kukuba, ndikopishe ifayela le-45 MB ukusuka kwiDropBox ukuya ku-Google Drayivu kwimigqa ye-43 nje.
Kukho izicwangciso ezahlukeneyo, kodwa ngeenjongo ezisisiseko, inguqulelo yamahhala inele. Ngexesha leentsuku ze-15 unokunandipha i-Premium version njengolu vavanyo.
Emva koko, yenza ukuvumelanisa phakathi kwe-akhawunti yeDropbox ne-Google Drayivu, ngaphezu kwe-9 GB kunye neefayile ezinkulu kune-GB enye, iyure kunye nemizuzu.
Ndikhuphela a iifayile 9 300 MB kwibhokisi nganye ku Google Drive, endayiphakamiselayo kum umyalezo: "Le nqubo iye ngokugweba uthathe imizuzu ngaphezu kwezihlandlo ezibini, kodwa ziya kusebenza kuyo imvelaphi, xa ugqibile uya kuthumela imayile". Eneneni nam imizuzu embalwa kamva kwafika isigidimi ukuba ikopi esasenziwe.
Mhlawumbi yimizekelo ye-rustic yento endiyame ngayo, kodwa le nkonzo inako.
Ngoko, ndincoma ukubhalisa. Hayikufumana kuphela le ntlawulo, kodwa nangenxa yokuba le nto inokuba yinkonzo esiyisebenzisayo ukukhuphela i-AutoCAD 2013 Course engayilanda kwiveki ezayo, ngokwecandelo, ngesahluko kunye nekhosi yonke.
Bhalisa kwi CloudHQ
Post edlulileyo«Edlulileyo Iipekseli zakutshanje
Post Next Yintoni entsha kwi-AutoCAD, i-ArcGIS kunye ne-Global MapperOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Indlela yokulayisha iifayile ezinkulu kwi-Google Drayivu"
Ukuba ufunde le nqaku kwi-2007, xa ibhaliwe, yiyiphi iGoogle Drive ngelo xesha, unokucinga ngendlela eyahlukileyo.
Iplanethi yeVegsia uthi:
Ebalaseleyo, ngokufanelekileyo, ndicinga ukuba ndiya kuyisebenzisa. UKUPHUMA KAKHULU Ndiyabonga!